Wararka Maanta: Isniin, Sept 16, 2019-Wararkii ugu danbeeyay dilal ka dhacay degmada Laascaanood
Wararka Maanta- Isniin, Sept 16, 2019
Wararkii ugu danbeeyay dilal ka dhacay degmada Laascaanood
Isniin, September, 16, 2019 (HOL)-Shirkada korantada Soolpawer ayaa qiratay masuuliyadda wiil dhalinyaro ah oo xalay ku dhintay magaalada Laascaanood xarunta gobolka Sool.
Cabdinaasir Maxamed Bare "Abbusheybe" gudoomiyaha shirkadda Soolpawer ayaa sheegay in shirkad ahaan ay bixinayaan xaqii wiil Itopian ah oo korantadoodu dishey.
"Waxbadan ayaa iskaashaday, hawlihii lagu hagaajinayey magaalada oo dhul badan oo dabaysan la dumiyey, tan labaad biro shirkado isgaadhsiin lahaayeen oo aan hada shaqayn oo tan hada wiilka ku dhegtey ay ka mid tahay" ayuu yiri C/naasir isagoo ugu baaqay dawlada hoose in ay guraan.
Sidoo kale gudoomiyaha gobolka Sool Cabdiqani Jiidhe ayaa arin laga naxo ku tilmaamay dhacdadan waxaanu tacsi u diray eheladii wiilkaas.
Dhinaca kale Gudoomyuhu waxa uu ka warbixiyey dil ka dhacay habeenimadii xalay oo lagu diley askari ka tirsan ciidanka Asluubta oo uu sheegay in ninkii falka geystey uu ahaa askari ka tirsan ciidanka Asluubta in lagu daba jirona waa uu sheegay.
Bandhigga Maalgashiga iyo Wax-soo saarka Hirshabeelle oo lagu soo xiray Jowhar
9/16/2019 2:24 PM EST
Isniin, September, 16, 2019 (HOL)- Madaxweynaha Dowladda Hirshabelle Dr Maxamed Cabdi Waare ayaa maanta soo xiray Shirwaynaha Bandhigga Ganacsiga iyo maalgashiga Beeraha, kaa oo labadii maalin ee la soo dhaafay ka socday Magaalada Caasimada ah ee Jowhar.
Madaxweyne Waare ''Hirshabeelle culeys Amni ayaa ku furan oo aan la qarin karin
9/16/2019 1:48 PM EST
Isniin, September, 16, 2019 (HOL)-Madaxweynaha dowlad gobolleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo ka hadlayay dhacdooyinkii is xig xigay labadii cisho ee la soo dhaafay ka dhacay waddada isku xirta Muqdisho iyo Jowhar ayaa sheegay Hirshabeelle waqtigan wajaheyso culeys dhanka Amniga ah.
Madaxweyne Farmaajo oo gaaray degmada Dhuusa-Mareeb
9/16/2019 11:05 AM EST
Isniin, September, 16, 2019 (HOL)-Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu horkacayo ayaa goor dhaw gaaray degmada Dhuusa-Mareeb ee xarunta dowlad gobolleedka Galmudug.
Askari ka tirsan ciidamada SPU oo lagu dilay Boosaaso
9/16/2019 10:14 AM EST
Isniin, September, 16, 2019 (HOL)-Askari ka tirsan ilaada ciidamada gaarka ee hay’adaha caalamiga ah ee magacooda loo soo gaabsho (SPU) ayaa toogasho ku dilay duhurnimadii maaanta askari kale oo isla ciidanka illaada hay’adaha ah.
Al-shabaab oo qarka u saaran in ay jaraan isku socodka waddada xiriirisa Muqdisho iyo Jowhar
9/16/2019 5:44 AM EST
Isniin, September, 16, 2019 (HOL)-Goob joogayaal ku sugan degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha dhexe ayaa sheegaya in saacadihii ugu danbeeyay waddada xiriirisa Muqdisho iyo Jowhar gaar ahaan deegaannada ku dhaw dhaw degmada Balcad soo buuxiyeen xoogag ka tirsan Ururka Al-shabaab.
9/16/2019 4:34 AM EST
Isniin, September, 16, 2019 (HOL)- Madaxweynaha Puntland, Siciid Cabdullaahi Deni ayaa sheegay inan la isku wadi karin Soomaaliya oo dal qani ah , walina ku tiirsan taageerada caalamka.
Weerar dad lagu laayey iyo koranto waxyeelo nafeed geysatey magaalada Laascaanood
9/16/2019 4:28 AM EST
Isniin, September, 16, 2019 (HOL)- Dabley hubaysan ayaa weerar la beegsaday laba nin duleedka bangiga magaalada Laascaanood xarunta gobolka Sool habeenimadii xalay kuwaas oo aan ilaa iyo haatan la aqoonsan.
Mas'uuliyiin Qarax ku dhaawacmay oo Muqdisho la keenay
9/16/2019 2:37 AM EST
Isniin, September, 16, 2019 (HOL)- Magaalada Muqdisho ayaa la keenay dhaaca mas’uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Shabeellaha hoose oo ku dhaawacmay weerar loo adeegsaday qaraxyo oo maalintii shalay ka dhacay duleedka degmada Shalaanbood ee gobolkaasi Shabeellaha Hoose.
Ciidamo Burundi ah oo lagu dilay weerar shalay ka dhacay waddada xiriirisa Muqdisho iyo Jowhar
9/16/2019 2:26 AM EST
Isniin, September, 16, 2019 (HOL)- Faah faahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxay weerar maalintii shalay [Axad] lagu qaaday kolonyo ay la socdeen ciidamo ka tirsan howlgalka midowga Africa AMISOM gaar ahaan kuwa Burundi oo ku safrayay waddada xiriirisa Muqdisho iyo Jowhar.
Guddoomiyaha gobolka Banaadir oo la kulmay xildhibaanno ka tirsan Labada Aqal ee Baarlamaanka Soomaaliya
9/16/2019 1:55 AM EST
Isniin, September, 16, 2019 (HOL)- Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed (Cumar Fillish) ayaa xalay kulan casho sharaf ah u sameeyay qaar ka mid ah Xildhibaanada Labada Gole ee Baarlamaanka Federaalka.
Iran oo iska fogeysay eedeyn uga timid Mareykanka
9/16/2019 1:39 AM EST
Isniin, September, 16, 2019 (HOL)- Iran ayaa hadalka Mareykanka ku tilmaantay " wax kama jiraan" kaddib markii Xoghayaha Arimaha Dibada ee Mareykanka Mike Pompeo uu sheegay in Tehran ay ka dambeysay weeraradii diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ee lagu qaaday labo xarumood oo saliida laga soo saaro oo laga leeyahay Sacuudiga.
Madaxweyne Farmaajo iyo wafdi uu horkacayo oo maanta tagaya degmada Dhuusa-Mareeb
9/16/2019 1:32 AM EST
Isniin, September, 16, 2019 (HOL)- Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa lagu wadaa in maanta Isniin ah gaaraan degmada Dhuusa-mareeb ee xarunta u ah dowlad gobolleedka Galmudug.
Meet Somalia's trailblazing female camel trader -Aljazeera
9/16/2019 1:12 PM EST
Kismayo, Somalia - Every morning just before sunrise, Zamzam Yusuf makes the short drive between her house in Kismayo to a farm about 30 kilometres (19 miles) outside the Somali port city.
Somalia releases first report on rights of children in over three decades -HOL
9/16/2019 9:02 AM EST
South Africa must be expelled from African Union, Paul Kagame suggested -BENINWEBTV
9/16/2019 8:29 AM EST
Rwandan President Paul Kagame, at a press briefing that announced the welcome of Africans stranded in Libya on his territory, spoke out on the South Africa case.
Al-Shabaab builds up offensives in Middle Shabelle, masses fighters along Jowhar-Mogadishu highway -HOL
9/16/2019 6:57 AM EST
MOGADISHU (HOL) - The militant group Al-Shabaab have ramped up attacks in Middle Shabelle region virtually cutting off main road use along Mogadishu-Jowhar highway in the last couple of days.
Popular online taxi firm employing more than 2,000 in Hargeisa -Radio Ergo
9/16/2019 6:50 AM EST
Burundian soldiers killed in Somalia ambush -AFP
9/16/2019 12:14 AM EST
Eyes on court in fight against Somalia’s oil block suit at UN -Businessdailyafrica
9/16/2019 12:12 AM EST
UN, World Bank call for sustained funding to end Somalia crises -The Eastafrican
9/16/2019 12:09 AM EST
Kenya among countries facing eminent economic collapse – UN -The Star
9/16/2019 12:07 AM EST